इजकिएल 24 ERV-NE - भाँडो अनि मासु - Bible Gateway
भाँडो अनि मासु
24 परमप्रभु मेरो मालिकको वचन मकहाँ आयो। त्यो दिन देशबाट निकालिएको नवौं बर्षको दशौं महीनाको दशौं दिन थियो। उहाँले भन्नुभयो,2“हे मानिसको छोरो! आजको दिन र आजैको दिनको नाम लेखिराख ‘आजै बाबेलको राजाको सेनाले यरूशलेमलाई घेर्यो।’3यो कुरा त्यो घरानालाई(इस्राएल) भन जुन परिवार आज्ञा पालन गर्न अस्वीकार गरिरहेछ। उसलाई यो कुराहरू भन। ‘परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
“‘भाँडा आगोमाथि राख,
भाँडा राख अनि त्यसमा पानी हाल।
4 त्यसमा राम्रो-राम्रो टुक्राहरू हाल,
फिला अनि कुमको मासुको टुक्राहरू हाल।
भाँडा सर्वोत्तम हड्डीहरूले पूरा भर।
5 बगालको राम्रो-राम्रो पशुहरू मार,
भाँडाको तल पूरा आगो लगाऊ,
अनि मासुको टुक्राहरू पकाऊ।
सुरूवालाई त्यस बेला सम्म पकाऊ,
जब सम्म हड्डीहरू राम्रोसँग पाक्दैन!’
6 “‘यसर्थ परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
यो यरूशलेमको निम्ति नराम्रो हुन्छ।
यो हत्याराहरूले भरिएको शहरका निम्ति नराम्रो हुन्छ।
यरूशलेम त्यो भाँडा जस्तै हो जसमा खियाको दाग छ,
अनि त्यो खियाको दाग जब सम्म हट्दैन,
त्यो भाँडा शुद्ध हुँदैन यसकारण मासुको प्रत्येक टुक्रा,
भाँडाबाट बाहिर निकाल! त्यो मासु नखाऊ।
पूजाहारीलाई त्यो बेकामको मासुबाट एउटा टुक्रा पनि छान्न नदेऊ!
7 यरूशलेम त्यो कलंकित दाग लागेको भाँडा जस्तै हो।
किनकि त्यसले बगाएको रगत त्यहाँ अहिले सम्म छ!
उसले खुल्ला चट्टानमा रगत हाली।
उसले रगत भूईंमा पोखाई अनि त्यसलाई धूलोले छोपीदिई।
8 मैले त्यसको रगत खुल्ला चट्टानमा हालें।
यसकारण यो नछोपियोस्।
मैले यसो गरें जसबाट मानिसहरू क्रोधित होउन्,
अनि उसले निर्दोष मानिसहरूलाई हत्याको दण्ड दिओस्।
9 “‘यसकारण परमप्रभु मेरो मालिक यसो भन्नुहुन्छ:
हत्याराहरूले भरिएको यो शहरमा नराम्रो हुनेछ।
म आगोको लागि दाउराको थुप्रो लगाई दिन्छु।
10 भाँडाको मुनि धेरै दाउरा लगाऊ।
आगो बाल राम्रोसँग मासु पकाऊ।
मसला मिलाऊ अनि हड्डीहरू बेस्सरी पकाऊ,
जब सम्म ती हड्डीहरू गल्दैनन्।
11 तब भाँडालाई खाली कोईलामा छोडीदेऊ।
यसलाई यति तातो हुनु देऊ कि
यसको दाग पनि डडोस्।
त्यहाँबाट अपवित्रता पूरै जाओस् अनि खिया नाश होस्।
12 “‘यरूशलेमले आफ्नो दागलाई धनुको लागि,
कठोर परिश्रम गर्न सक्छ
तर त्यो ‘खिया’ जाँदैन।
आगोले (दण्डले) मात्र त्यो खिया हटाउनु सक्छ!
13 “‘तिमीले मेरो विरूद्ध पाप गर्यौ,
अनि पापले कलंकित भयौ मैले तिमीलाई नुहाई दिन खोजें,
अनि तिमीलाई शुद्ध बनाउन चाहें।
तर दाग बाहिर आएन।
म तिमीलाई फेरि नुहाई दिन चाहाँदिन।
जब सम्म मेरो तातो क्रोध तिमी प्रति समाप्त हुँदैन।
14 “‘म परमप्रभु हुँ। मैले भनें, तिमीले दण्ड पाउनेछौ, अनि म यो गराउँछु। म दण्ड रोक्ने छैन। म तिम्रो निम्ति दु:खीत हुने छैन। म तिमीलाई अपवित्र कामहरूको निम्ति दण्ड दिन्छु, जो तिमीले गर्यौ। परमप्रभु मेरो मालिकले यसो भन्नुभयो।’”
इजकिएलको पत्नीको मृत्यु
15 त्यसपछि परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो। उहाँले भन्नुभयो, 16 “हे मानिसको छोरा! तिमी आफ्नो पत्नीलाई ज्यादै प्रेम गर्छौ, तर म उसलाई तिमीदेखि टाढो लान्छु। तिम्रो पत्नी अचानक मर्नेछन्। तर तिमीले उसको मृत्युमाथि शोक गर्ने छैनौ। तिमी चिच्याउने छैनौ। आफैंलाई रून नदेऊ। 17 तर तिमीले आफ्नो शोकमा सुस्केरा हाल। आफ्नो मृतक पत्नीका निम्ति नरोऊ। तिमीले सधैँ जस्तै साधारण लुगा लगाऊ। आफ्नो फेटा र जुत्ता लगाऊ। आफ्नो शोक प्रकट गर्न जुगाँ नछोप अनि एउटा मानिस मर्दा मानिसहरूले खाने भोजन नखाऊ।”
18 त्यसको अर्को बिहान, म मानिसहरूलाई भन्दै थिएँ। त्यही साँझ मेरी पत्नीको मृत्यु भयो। अर्को बिहान मैले त्यही गरें जुन परमेश्वरले मलाई आज्ञा दिनु भएको थियो! 19 त्यसपछि मानिसहरूले मलाई सोधे, “तिमीले यो काम किन गरिरहेकाछौ? यसको अर्थ के हो?”
20 मैले तिनीहरूलाई भने, “परमप्रभुको वचन मकहाँ आयो, उहाँले भन्नुभयो, 21 इस्राएलको घरानालाई भन्नु, परमप्रभु मेरो मालिकले भन्नुभयो, ‘हेर, म मेरो स्थानलाई नष्ट गर्नेछु। तिमीहरूलाई त्यसको घमण्ड छ अनि तिमीहरूले यसको विषयमा प्रशंसाको गीत गाउँछौ। तिमीले त्यो स्थान हेर्न मन पराउँनेछौ। तिमी साँच्चै त्यो ठाँउलाई प्रेम गर्छौ। तर म त्यो ठाँउ नष्ट पार्नेछु अनि तिमीले त्यागेका नानीहरू मारिनेछन्। 22 तर तिमीले त्यही गर्नेछौ जुन मैले आफ्नो मृत पत्नीको विषयमा गरें। तिमीले आफ्नो शोक प्रकटको निम्ति जुगाँ छोप्ने छैनौ। तिमीले त्यो भोजन खाने छैनौ जुन प्राय कुनै मानिस मर्दा अरू मानिसहरूले खान्छन्। 23 तिमीहरूले आफ्नो फेटा अनि जुत्ता लगाउँछौ। तिमीहरूले आफ्नो शोक प्रकट गर्ने छैनौ। तिमी रूने छैनौ। तर तिमी आफ्नो पापको कारणले नष्ट हुनेछौ, तिमी चुपचाप आफ्नो अफशोस् अरूसँग गर्नेछौ। 24 यसकारण इजकिएल तिम्रो निम्ति एउटा उदाहरण हो। तिमीले त्यही सब गर्नेछौ जुन उसले गर्यो। दण्डको समय आउँनेछ अनि तिमीहरूले थाहा पाउँनेछौ म नै परमप्रभु हुँ।’”
25-26 “हे मानिसको छोरा! म त्यो सुरक्षित भूमि यरूशलेम मानिसहरूबाट लिनेछु। त्यो सुन्दर भूमिले तिनीहरूलाई आनन्दित पारिरहेछ। तिनीहरूले त्यो स्थान हेर्न मन पराउँछन्। तिनीहरूले साँच्चै त्यो स्थानलाई प्रेम गर्छन्। तर त्यस समय म शहर अनि तिनीहरूको नानीहरू तिनीहरूबाट लिन्छु। बाँच्नेहरू मध्ये एकजनाले तिमी कहाँ नराम्रो समाचार लिएर आउनेछ। 27 त्यस समय तिमी त्यो मानिससित बात गर्न सक्छौ। तिमी अब अझ अधिक चुप लागेर बस्न सक्तैनौ। यसकारण तिमी उसको उदाहरण बन्नेछौ। त्यति बेला तिनीहरूले थाहा पाउँनेछन् म, नै परमप्रभु हुँ।”